Aung San/Aung San Suu Kyi » နောင်ရေးအတွက် စုနိုင်ဖို့လို	8
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဲ အလိမ်မခံရဖို့ အရေးကြီးတာမို့ ဝီရိယစိုက်ထုတ်ပြီး စစ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Alinsett @ Maung Thura says: မဲ တစ်ခုတည်း အားကိုးလို့မရဘူးထင်တယ်….
kai says: ဒေါ်စု ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီး သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ နက္ခတ်ပညာရှင် ဟောကိန်းထုတ်
DawAungSanSuuKyi	By ဒီဗွီဘီ
Alinsett @ Maung Thura says: ပစ်ယုံလိုက်ချင်တယ်။
မြစပဲရိုး says: ဒီဘက် ဇာတာကို ဟော သလို ဟိုဘက် ဇာတာ ကိုရော ကြည့်ဖို့ သင့်သေး။
Mike says: . ဒေါ်စုက ပြန်ပြောတာလေးလဲ သဘောကျလို့ ပြန်ပြောရဦးမယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် NLD ကို .မဲပေးကြပါ တဲ့။ ကဲ နိုဝင်ဘာရောက်ယင် မဲပေးလိုက်ကြပါဦးစို့။
Mike says: . “ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ အရင်တုန်းကမလုပ်ဖူးတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
aye.kk says: အမေစုနိုင်မှဖြစ်မှာပါ၊